Naya Post Nepal | पल र नाबालिका गायिकाको बारेमा रेखा थापाले लेखीन यस्तो टि’प्पणी हेर्नुहोस्।
पल र नाबालिका गायिकाको बारेमा रेखा थापाले लेखीन यस्तो टि’प्पणी हेर्नुहोस्।
काठमाडौं – नायक गायिका प्र करणमा रेखा थापाले मुख खो’लेकी छिन । अभिनेत्री रेखा थापा केहि समय अघि मात्रै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छन् । उनले बलराम शाहीसँग केही हप्ता अघि कोर्ट म्या’ रिज गरेकी छिन्।
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सफल अभिनेत्री रेखा थापाको यो दो’स्रो विवाह हो ।यसअघि निर्माता छविराज ओझासँगको वैवाहिक स म्ब न्ध स` म्बन्ध विं च्छे दमा टु’ङ्गि’एको थियो । रेखा र शाही लामो स मयदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए ।
प्रेमको चर्चा चलेपनि रेखाले आ’गामी वैशाखमा मात्रै विवाह गर्ने बताउँदै आएकी थिइन् ।उनीहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुगेर विवाह गरेको बताइएको छ । २०५६ सालमा चल’चित्र ‘हिरो ’बाट डेब्यु गरेकी रेखाले एक दशकसम्म चलचित्र क्षेत्रमा राज गरिन् ।
हाल भने उनी चलचित्रभन्दा राजनीतिमा बढी सक्रिय देखिन्छिन् ।
रेखा थापाले अहिलेको एक दमै च’र्चाको बिषय पल र नाबालिका गायिका प्र’करण बारे घुमौरो शै’लिमा बोलेकी छिन, उनले आफ्नो फेशबुकमा एक स्ट्राटस् लेख्दै , यस्तो भनेकी छिन यस्तो छ थापा को स्ट्राटस्
“२० बर्ष मुनिका छोरीहरु बालिका हुन, बालिका कानुनत: सबै प्रकारका सुरक्षा र अ’भिभा’वकत्व प्राप्त गर्ने अधिकार राख्दछन ।
समाजको भूमिका उनिहरुलाई सम्र’क्षण गर्ने हो । को सँग लभ छ? कती पटक यौ न सं प र्क भयो ? यस्ता नैतीकताबादी कुराको कानु नलाई म’तलब हुनु हुँदैन ।
समाजको आ’डम्बर त कुरा गरी साध्य छैन । केटी मान्छे भने पछी दुनियाँ भरी कतै नभएका नैतीक मा’पद’ण्ड र हिलो छ्याप्ने चलन लज्जाजनक रुपमा नेपालमा ब्या प्त छ ।
२०७८ फाल्गुन १७, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 419 Views